Mgqibelo 2 Julayi 2022
Izikhwama Njengokuvela kwemishini yokubhala yabathengisi kubonisa ukuguqulwa kwesimo esibonakalayo esiyinkimbinkimbi ukuya kufomu elinobukhulu obuhlanzekile, elinobukhulu bejometri, i-Qwerty-elemental isibonakaliso samandla, ukuvumelanisa, nokwenza izinto zibe lula. Izingxenye zensimbi ezakhayo ezenziwe izingcweti ezahlukahlukene ziyinto ebonakalayo ehlukile yomkhiqizo, enikeza isikhwama ukubukeka kwezakhiwo. Ukugqama okubalulekile kwesikhwama yizikhiye ezimbili zokubhala ezizenzele futhi zahlanganiswa ngumklami ngokwakhe.
Iqoqo Labesifazane Iqoqo, iMacaroni Club, liphefumulelwe yi-The macaroni & # 039; s kusuka maphakathi nekhulu le-18 libaxhumanisa nabantu banamuhla abayimilutha ye-logo. IMacaroni kwakuyigama labesilisa ababedlula imingcele esejwayelekile yemfashini eLondon. Babengama-logo mania wekhulu le-18. Leli qoqo lihlose ukukhombisa amandla we-logo kusukela kudala kuze kube manje, futhi idala iMacaroni Club njengophawu ngokwayo. Imininingwane yokwakheka iphefumulelwe kusuka kwizambatho zeMacaroni ngonyaka we-1770, kanye nemfashini yamanje yamanje yovolumu ngokweqile nobude.
Iqoqo Labesifazane Umklamo weqoqo le-Hybrid Beauty ukusebenzisa ukusikwa njengendlela yokusinda. Izici ezinhle ezisunguliwe zingamaribhoni, ama-ruffles, nezimbali, futhi zivuselelwa ngemishini yokugaya yendabuko kanye namasu wokuhlanza umzimba. Lokhu kuphindisela izindlela zakudala zokuphuma ku-hybrid zesimanje, ezingothando, ezimnyama, kodwa futhi ezingapheli. Inqubo yonke yokuqamba yobuhle beHybrid ikhuthaza ukuqina ukudala ukwakheka okungaphelelwa isikhathi.
Namacici Izikhwama Iqoqo Labesifazane Iwashi Lesikhathi Iqoqo Labesifazane Indandatho